adeegaya 04 | Bisposimplicio's Blog
← IV ADMINISTRATORIUS
TJÄNA 04 →
Posted on 18 18-07:00 janeiro 18-07:00 2014 by bisposimplicio
Jan – 014
Source: Scroll of Yehoshu ‘ Masiixa
Theme : ballamihii iyo muujinta
Reading : T’om 3:2-16
Marka aad gashid dhul iyo socdaan meel kasta , haddii ay helaan aad cunaan wixii aad , iyo iyaga ka mid ah ay bogsiiyaan kuwa buka . 3 Waayo, waxa afkaaga galay aadan ugu nijaasoobin doonaa , laakiin waxa 4 afkiinna ka soo baxay waa kuwo aad waxa ugu nijaasoobin . Yehoshu ‘ wuxuu yiri: Marka aad aragto mid ka mid ahaa ma naagu dhashayse , Sujuuda wejigooda aad iyo caabudaan oo dhulka aad : waa in aad Aabaha 5 Yehoshu ‘ wuxuu yiri: Waxaa laga yaabaa in ragga ay kula tahay in u yimaadeen inay nabad ku dul dunida ku tuureen . Ha ogaadaan kuwa ku faafaya ku waswaasiyo oo u yimid oo dhulka ku dul : dab , seef , iyo dagaal . 6 , ha – arkaya shan guri : laba iyo laba ka gees ah saddex noqon doona saddex , aabbe wiil ka gees ah iyo wiil aabbe ka gees ah . Oo iyana waxay ku istaagi doonaan keli ah . 7 Yehoshu ‘ ayuu yiri : waxaan idin siin doonaa wixii aan iluna ma arkin , waxa uu dhegta ku jirin ayaa maqlay , waxa gacanta jirin taabtay oo waxa aan marnaba ka dhacay in ay maanka nin . 8 xertiisii ku yidhi Yehoshu ‘ : Noo sheeg , sida noo fim.Yehoshu doonaa ‘ ayuu yiri , Idinku waxaad la ogaado , ka dibna , bilowga , in aad raadsato dhamaadka ? Waayo, meeshii bilowgii ay tahay , dhamaanayaa , halkaas . 9 Waxaa faraxsan kii uu meel bilowgii qaadan doonaa , wuu garan doonaa dhamaadka iyo dhimasho uma dhadhamin doonaan . 10 Yehoshu ‘ ayuu yiri yuul waxa ay ahayd mar hore ka hor muuqday . Haddii aad ka noqoto xertayda iyo hadalladayda dhegaysta , dhagaxyadan , waxay noqon doontaa inaad hesho adeeg . 11 , waxaa jira shan geed kuu dagnaa janada taas oo beddelin , qaboobaha iyo kulaylaha ah , kuwaas oo caleemo ma dhici . Kii iyaga ogaadaan ma aha waxay la kulmi doonaan dhimasho . 12 Xertiisii waxay ku yidhaahdeen Idinku – Hoshu ‘ : noo sheeg taas oo ugu eg boqortooyada jannada . 13 Markaasuu iyagii ku yidhi : Isagu wuxuu u eg Xabbad Khardal ah , wada yar tahay iniinaha oo dhan . Laakiin marka dhoco, ciidda la beeran soo saartaa warshad weyn oo uu noqdo hoy u ah Haadka samada oo . 14 Myriam sheegay in Yehoshu ‘ : Yaad tihiin xertayda aad ? Waxa uu yiri: Waxay u eg yihiin carruur ah kuwaasoo degay beer taas oo aan iyagaa leh . 15 Markii mulkiilayaashii duurka ku yimaado , waxay igu odhan doonaan : Sii our field ! Waxay qaawiso ee joogitaankooda si ay u heli kartaa duurka ku back iyo gacanta iyaga . 16 Sidaa darteed waxaan idinku : haddii ninka guriga leh ku ah og yahay in tuug waxay u iman doontaa , oo ay xaqiijin doonaan ka hor inta yimaaddo ma sii dayn doonaa inay guriga uu domain isaga soo galaan si ay kaxaystaan xoolihiisii . Haddaba idinku waa , noqon on waardiyayaashu aad ka dhanka ah dunida .
Waxay ahayd on bayaankan Yerroshu ‘ Yerroshaléym in golaha sanadka 55 , shirkii reer rususha, haga warqad si kuweeda ah dadka aan Yuhuudda ahayn ku sugan Falimaha Rasuullada 15:23-29 dhexdooda .
Yerroshu ‘ maalin ku xusan aabaha Ramom ah ( AbHamom ) iyo muuqaalka rabbaani ah sida Malktsedec oo aan sidii abtiriskoodii ahaa , Aabbe ma lahayn, hooyona ma lahayn, bilowga ama dhammaadka maalmood ( conf.Heb.7 :1 – 4 ) .
Sida Alliance Previous , Yerroshu ‘ oo goglan wasaaraddiisu shirka ka kooban nebiyada , iyo qorayaasha caqliga iyo announcers ; ( Mat.23 : Efés.4 34 iyo 11 ) .
In qoraalka ee su’aasha laga helay Yerroshu ‘ samaynta ballanka muqaddas inuu muujiyo waxyaalaha qarsoon ee si uu shirkii oo , wuxuu cunaqabatayn muujinta in tusay Xanoog toddobaad ee laga soo Haartz . (cf. Xanoog 10:15-17 ) .
Golaha Qaranka OF hoggaamiyayaasha kiniisadda iyo kuwa raaca wadaaddada kaniisadda YEHOSHU ‘ Masiixa